Iwe Unofarira Unoverenga Technorati? | Martech Zone
Nguva yeimwe bvunzo vanhu! Ini ndoda kuona kuti kana kusave neni mumatekiniki ako eTechnorati kunowedzera chinzvimbo cheblog rangu. Heino skrini yeyangu yazvino chinzvimbo, kungoitira kuti iwe uzive kuti ini handisi kuyedza kudhonza iyo mvere pamusoro pemeso ako:
Kana usati watojoinha, ndinokurudzira zvikuru Technorati. Hechino chinongedzo chekuwedzera ini kune ako Favorites:
Hechino chivimbiso changu kwauri ... ini ndichawedzera imi mose kune vandinofarira pandinongoona kuti mawedzera ini. Svondo rinouya, ini ndichatarisa chinzvimbo uye ndinotumira chinzvimbo mushure mekunge vamwe vanhu vandiwedzera.
Cascading Style Mapepa
Sep 8, 2006 na11: 37 PM
Ini handifunge kuti vanoverenga - ingori imwe nzira yekusimudzira elitism mu blogosphere, ndinofunga.
(Uye hongu, ndakazvifarira!)
Sep 9, 2006 pa 5: 47 AM
Pfungwa yakanaka yemuedzo Doug, akawedzera iwe seunofarira. Ngatione kana zvichiita mutsauko.
Sep 10, 2006 na12: 50 PM
Sekuziva kwangu, haina kuverenga.
Ndakuwedzera kune vandinoda, sezvo ini zvakadaro ndakanyoresa kuburikidza neRSS 🙂
Sep 10, 2006 na8: 43 PM
Ndinofunga imi vanhu ndizvozvo. Ini ndawana mamwe mareferenzi kune yangu saiti saka chinzvimbo changu chakakwira; zvisinei, hazviite sekunge kuti avo vaunofarira vakazvikanganisa.
Sezvineiwo zvakaringana hazvo, ini ndakaita mumwe wevanhu vakaisarudza seyandinoda pane vangu vandinoda uye ndinotenda zvakabatsira chinzvimbo chavo. Asi aive akaverengerwa mumazana mazana mapfumbamwe ezviuru. Mushure mekunge ndamumaka seanodiwa, akasimuka kusvika vangasvika zviuru mazana masere nemakumi mana nemana.
Zvichida zvinongobatsira mune chinzvimbo kana iwe usina kutaurwa kubva kune chero mamwe mablog. Hmmm.
Sep 11, 2006 pa 7: 11 AM
Icho chinhu chakanaka kwandiri icho zvandinoda zvisingaverenge, kana ini ndingave ndisipo mune chinzvimbo!
BTW, yako anti-spam izwi haisi kuoneka muIE7. Iwe unonyatsoda kurega kuishandisa 🙁
Sep 14, 2006 pa 10: 40 AM
SEOmoz irikuedza pamwe neiyi mitsara:
SEOmoz Technorati Wepamusoro 100